ह्वात्तै घट्यो सुनको मूल्य, कतिले भएको छ कारोबार ? – Online Nepal Site
मुख्य पृष्ठ /News/ह्वात्तै घट्यो सुनको मूल्य, कतिले भएको छ कारोबार ?
काठमाडौं – शुक्रबार नेपाली बजारमा सुनचाँदीको मूल्य घटेको छ। बिहीबार ह्वात्तै बढेको सुनको मूल्य शुक्रबार तोलामा सात सयले घटेको नोपल सुनचाँदी व्यवसायी महासंघले जानकारी दिएको छ ।
बिहीबार छापावाल सुन तोलामा ९७ हजार ६ सय रुपैयाँमा कारोबार भएको थियो । शुक्रबार सात सयले घटेर ९६ हजार नौ सय कायम भएको महासंघले जनाएको हो।तेजाबी सुन ९६ हजार चार सय रुपैयाँमा कारोबार भएको छ । यस्तै, चाँदी तोलामा पाँच रुपैयाँले घटेर १३ सय ४० रुपैयाँ कायम भएको छ । ** यो समाचार पुरा हेर्न तल क्लिक गर्नुहोला **
काठमाडौं, १२ भदौ । आईबीएस (इन्ट्रिग्रेटेड ब्रेकिङ सिस्टम) जडित हिरोको नया सुपर स्प्लेन्डर नेपाली बजारमा सार्बजनिक भएको छ ।सुपर स्प्लेन्डर आईबीएस भर्सन देशभरिका हिरोे मोटरसाइकलको आधिकारिक शोरूममा उपलब्ध भइसकेको कम्पनीले बताएको छ । अहिले निषेधाज्ञा जारी रहेकोले यसको किनबेच नभए पनि निषेधाज्ञा खुलेपछि ठुलो मात्रामा कारोबार हुने अनुमान कम्पनिको रहेको छ ।
त्यस्तै १३ लिटर क्षमताको इन्धन ट्यांकी रहेको यो मोटरसाइकलले प्रति लिटर ६० किलोमिटरको माइलेज दिने कम्पनिको दावी रहेको छ । यसमा आई-थ्री-एस प्रणाली रहेको हुदा माइलेज धेरै दिने कम्पनिको दावी छ । यसमा साइड स्ट्यान्ड इन्डिकेटर, १८ इन्च एलोय ह्वील्स, आरामदायक सीट र लाइटवेटले गर्दा यो मोटरसाइकल सबैको लागी चलाउन सजिलो हुनेछ । ** यो समाचार पुरा हेर्न तल क्लिक गर्नुहोला **
प्रेम गीत ३ का लेख,क तथा, निर्देशक, छेत,न गुरुङको, नि’ध’न